Sir Alex Ferguson oo amaanay Arsene Wenger kadib go’aankii uu qaatay – Gool FM
Sir Alex Ferguson oo amaanay Arsene Wenger kadib go’aankii uu qaatay
Liibaan Fantastic April 21, 2018
(London) 21 Abriil 2018 Tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa amaanay dhigiisa Arsene Wenger oo ugu danbayntii go’aansaday inuu ka tago kooxdiisa kadib 22-sano oo uu laylinayay.
Sir Alex Ferguson ayaa sheegay in Wenger uu banaanka soo dhigay halyeeynimadiisa kadib markii uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda waqtigaan si uu u helo macsalaamaynta uu u qalmo.
Arsene Wenger ayaa shalay si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka tagayo Arsenal dhamaadka xiliciyaareed kaan, tababarihii hore ee Man United oo ka hadlay go’aanka Wenger ayaa yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay go’aanka Arsene Wenger, waan ixtiraamaa isaga iyo waliba shaqadii uu ka qabtay Arsenal, waan ku faraxsanahay inuu shaaciyay bixitaankiisa waqtigaan si uu u helo macsalaamaynta uu u qalmo”.
“Taasi waxay cadayn u tahay xirfadiisa iyo go’aankiisii uu 22-sano ku qaatay xirfada uu aadka u jecelyahay, waliba xili la joogo in tababareyaashu aysan hal koox joogi karin wax kabadan hal ama labo sano, taasi waxay ku tusinaysaa inta ay la egtahay shaqadii uu ka haayay kooxda wayn ee Arsenal”.
“Shaki la’aan waa mid kamid ah tababareyaasha ugu fiican Premier League, waana ku faanayaa inaan la tartamay isaga, isla markaana aan saaxiib la ahay ninkaas wayn”.
Maxaad ka ogtahay dhibaatada Luis Suarez ka haysata Final-ka Copa del Rey?
Kacdoonka “Wenger Out” oo Gaba Gabeeyay Waayaha Macalinka Arsenal... Xili Somaalina ay Ka Qeyb qateen.